Lalao 15 toa an'i Roblox (2020) - Safidy tsara indrindra - Lalao
Talohan'ny famoahana an'i Roblox, hafa tanteraka ny foto-kevitry ny rafitra famoronana lalao. Farany, taorian'ny famotsorana ny Roblox , novaina ny hevitra ary nanome toerana ny lalao maro toa an'i Roblox aza.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hizara ny sasany amin'ireo lohateny fasika sy MMO tsara indrindra izay mitovy amin'ny Roblox amin'ny lafiny maro izahay. Mety hahita vitsivitsy amin'ireo lalao ireo ianao azo antoka sy tsara kokoa noho Roblox koa.
Lalao toa an'i Roblox - 15 safidy hafa hilalao
Trove dia karazana lalao Massively Multiplayer Online sy Sandbox. Ity lalao ity dia mitovy amin'ny Roblox ary mamela ny gamer hahita sy hijery ny tontolo iainana ary hanao hetsika mahafinaritra.Azonao atao koa ny manangana ny tranonao manokana izay fantatra amin'ny anarana hoe fehizoro.
Ny lalao aza mamela ny mpilalao hisafidy kilasy kilalao samihafa toa ny Knight na Dracolite.Azonao atao koa ny manamboatra ny toetranao miorina amin'ny safidiny manokana.
Kaody fampiroboroboana Roblox & Wiki
Ity lalao ity dia manolotra sary mahavariana. Tsy toy ny lalao an-tserasera hafa izay mitovy amin'ny Roblox, ny lalao Garry's Mod dia tsy misy tanjona.Azonao atao ny manao ny zavatra rehetra tianao hatao ao anatin'ity lalao ity. Azonao atao koa ny mampiasa ireo zavatra ireo mba hamoronana fitaovam-piadiana vaovao, singa manodidina ny tontolo iainana, ary na dia ny fiara aza.
Amin'ny fampiasana ny zavatra noforoninao dia afaka mandeha fiara manodidina ilay faritra ianao na manidina mihitsy aza mba hahitana sy hijerena ny tsirairay sy ny zava-drehetra.Na i Garry's Mod aza avelany hifanerasera ny mpilalao azy satria manohana ny lalao Multiplayer izy.
CastleMiner Z dia lalao lalao fitobiana fasika velona. Ny tontolon'ny lalao ankapobeny dia toa notsindrian'ny Minecraft. Mba ho tafavoaka velona amin'ny lalao dia mila manamboatra fitaovam-piadiana ianao ary mampiasa fitaovam-piadiana mitovy amin'izany hiadiana amin'ny biby goavambe.
Amin'ny fampiasana ny maody famoronana dia afaka mampiasa sakana isan-karazany ianao mba hamoronana rafitra tsy manam-paharoa ary azonao atao aza ny mamonjy ireo zavaboarinao amin'ny lalao izay mahavariana loatra.CastleMiner Z tsy misy afa-tsy amin'ny Windows PC.
4. Ireo Blockheads
Ny Blockheads dia lalao velona miavaka. Mamela ny mpampiasa azy hanamboatra, hanangana, hitrandraka, ary maro hafa ao anatin'ny lalao. Azo alaina finday Android sy iOS izy io. Ny endri-javatra vaovao dia ampiana amin'ny lalao miaraka amin'ny fanavaozana rindrambaiko mahazatra koa.
Ao amin'ny The Blockheads dia afaka mizaha toerana amin'ny toetr'andro sy fizaran-taona samy hafa ianao.Eo am-pilalaovana ity lalao ity dia hahita tranga tena misy ianao, toy ny toetr'andro mangatsiaka mandritra ny alina. Amin'ny toe-javatra toy izany dia mila mampiasa ny loharano anananao ianao hamoronana afo afo sy ho tafavoaka velona amin'ny lalao.
Animal Jam dia lalao tsy manam-paharoa toa an'i Roblox ary tsy mila ampidininao akory izany satria lalao an-tserasera. Mitovy amin'ny Roblox, In Animal Jam hilalao ireo lalao ireo ho toy ny toetra amam-panahy biby.
Rehefa milalao an'ity lalao ity ianao amin'ny voalohany, dia mety hahatsapa ianao fa novolavolaina ho an'ny ankizy ny lalao, saingy rehefa milalao ity lalao ity ianao dia lasa mahaliana loatra. Ny biby dia azo namboarina araka ny safidinao.
6. Tontolo Lego
Andao ho marin-toetra, dia ny fanirianay tamin'ny fahazazantsika ny hanana fanangonana Lego Blocks goavambe. Amin'ny filalaovana World Lego dia azonao atao ny manonofinofy ny fahazazanao hanana ny bloc lego tsy misy fetra na dia izao aza. Mitovy be amin'ny Roblox izy io, manolotra Lego Worlds hizaha ny tontolo iainana.
Ny zavatra mahatalanjona dia ny tontolon'ny lalao manontolo dia biriky LEGO. Azonao atao ny mamorona izay tianao ao amin'ity lalao ala-fasika ity.
Raha tianao ny milalao Roblox dia lalao mety aminao i Mythruna. Mandritra ny filalaovana Mythruna dia hankafizanao ireo singa fananganana sy asa-tanana marobe ao anatin'ny lalao.
Ary koa, misy lalao filalaovana andraikitra kely ao Mythruna. Raha ny filazan'ireo mpamolavola, ny mpilalao tsirairay dia ho ampahany amin'ny tantara tsy manam-paharoa arakaraka ny fizotrany.
Ity lalao ity dia mitovy amin'ny Lego Worlds. Blockland dia lalao fananganana biriky izay mamela ireo mpampiasa azy hijery ny tontolo iainana sy hanangana rafitra eny an-dàlana.
Ity lalao fantsom-pasika ity dia azo lalaovina amin'ny mpilalao tokana na koa ny maody lalao marobe.Blockland dia lalao multiplayer an-tserasera.
Lalao hafa toa an'i Roblox ao amin'ilay lisitra ny Creativerse. Maimaimpoana ity lalao sandbox ity. Izy io amin'ny ankapobeny dia lalao velona izay manolotra hizaha ny tontolo iainana ary rehefa mijery ianao dia hahita flora sy biby.Araka ny safidinao dia azonao atao ny milalao ity lalao ity amin'ny namana na fianakaviana na amin'ny mpizara ho an'ny daholobe koa.
Raha mampitahanao ny sary dia tsara kokoa noho ny Roblox i Creativerse.Afaka milalao Creativerse mora foana amin'ny solosaina Windows sy ny macOS ianao.
Minecraft dia lalao malaza be hafa ary manana anarana lehibe amin'ny karazana lalao Massively Multiplayer Online. Ity lalao ity dia mamela ny mpampiasa hanangana izay azony eritreretina. Minecraft dia nanampy nirehareha tamin'ny iray amin'ireo vondrom-piarahamonina filalaovana lehibe indrindra.
Na dia manana sary ambany kalitao aza ity lalao ity. Saingy, manome lalao tontolo mahavariana ho an'ireo mpampiasa azy ny lalao toy ny zohy, rano, ala, ary maro hafa. Mba handrosoana bebe kokoa dia mila mandeha fotsiny ianao ary mizaha ny tontolo iainana, ary mamita asa manokana sasany.
Eny an-dàlana, mety hanafika anao koa ny zombies na hala, ary ny zavaboary manimba hafa koa. Mila mitondra fitaovam-piadiana ianao hiarovan-tena.Ny Minecraft dia misy amin'ny sehatra filalaovana rehetra azonao eritreretina ary amin'ny ankapobeny dia iray amin'ireo lalao tsara indrindra izy io.
Raha mitady alternatives Roblox ianao dia zahao ny KoGaMa. Ity lalao ity dia azo raisina ho iray amin'ireo lalao mampiankin-doha indrindra toa an'i Roblox.Ity lalao ity dia manolotra maody lalao multiplayer. Noho izany, azonao atao ny mankafy azy amin'ny namanao amin'ny Internet.
Araka ny safidinao dia azonao atao ny mamorona sy mamolavola kilalao anao manokana na milalao ny lalao noforonin'ny hafa.Ary koa, amin'ity sehatra ity, dia afaka mahita lalao fitifirana ianao, lalao arcade, lalao RPG, lalao hazakaza-dalao ary lalao maro ataon'ny mpitsangatsangana. KoGaMa dia azo lalaovina amin'ny solosaina finday na tablette afaka mihazakazaka fitety biraonao.
Ka, fantatry ny rehetra ny atao hoe Fortnite. Maimaimpoana ny milalao battle royale izay mizara lafin-javatra maro amin'i Roblox.Raha ny marina dia ny sary sy ny lalao amin'ny Fortnite no tsara kokoa noho ny lalao maro hafa toa an'i Roblox. Misy lalao telo an'ny Fortnite, Fortnite: Save the World, Fortnite Battle Royale, ary Fortnite Creative. Ny farany dia manolotra traikefa filalaovana roblox tahaka ny Roblox.
Ao amin'ny lalao Fortnite Creative, omena fidirana amin'ny nosy manokana ireo mpilalao hahafahan'izy ireo mamorona tontolony sy faritra iadanan'izy ireo. Amin'ny fampiasana an'ity lalao ity dia afaka milalao lalao tsy ofisialy maromaro ianao toy ny lohateny hazakazaka ihany koa.
Terasology dia lalao iray hafa izay mitovy amin'ny Roblox. Ity lalao ity dia mizara ny lafiny filalaovana avy amin'ny Roblox sy Minecraft koa. Raha te ho ambaratonga amin'ity lalao ity dia tsy maintsy hiady ianao, ho tafavoaka velona, ​​ary hamita asa eny an-dalana.Amin'ity lalao ity, ny mpilalao dia afaka mijery ny tontolo noforonin'izy ireo.
Ity lalao ity dia manana fiasa bebe kokoa hatrany miaraka aminy fanavaozana manaraka.
Terraria dia lalao fanao amin'ny fasika ary tena mitovy amin'ny Roblox. Manome ny mpampiasa azy hitrandraka manodidina ny lalao sy hamita iraka maromaro. Hita amin'ny PC, MAC, Linux, Android, ary iOS izany.Amin'ity lalao ity, ny maody tena ilaina dia ny mihady, miady ary manangana. Araka ny anaran'ny maodely fananganana dia natokana manokana ho an'ny tanora mpamorona izany.
Terraria dia nanangana vondrom-piarahamonina lehibe iray nandritra ny taona maro.Raha te ho any amin'ny ambaratonga avo kokoa dia mila manangona akora manta sy entona asa-tanana ianao amin'ny fampiasana azy ireo. Ireo entana vao vita dia hanampy anao hamita iraka amin'ny hafainganam-pandeha.
15. Kintana mpiady
Amin'ity lalao finday ity dia afaka milalao mifanohitra amin'i AI ianao na mpilalao hafa ary mamaha ny fahaiza-manao vaovao, ny Herinaratra ary na dia ny Gadgets aza mba hanatsarana ny mpiady anao rehefa milalao.Raha tianao ny milalao Roblox dia Brawl Stars no mety ho safidy Roblox tsara indrindra ho anao.
Izy io dia novolavolain'i Supercell. Brawl Stars dia manolotra fomba filalaovana maro isan-karazany ao anatin'ny lalao toa ny Gem Grab, Showdown, Bounty, Heist. Hetsika manokana marobe ihany koa no raisina ao anatin'ity lalao ity.Ary koa, ity lalao ity maimaim-poana tanteraka misintona sy milalao.
Ka ireto ny sasany amin'ireo lalao tsara indrindra izay mitovy amin'ny Roblox ary mendrika hilalaovana.Azonao atao ny manandrana ireo lalao ireo ary jereo raha tianao izany.
Ny fifangaroan'ny tantara an-tsehatra sy ny horohoron'ny Bly Manor
Lovecraft Country Season 2: Daty Famotsorana: mpilalao sy tantarao ny zava-drehetra tokony ho fantatrao!
mijery sarimihetsika vaovao an-tserasera
kaody karatra fanomezana $ 500 amazon maimaimpoana
manaova lobakao amin'ny roblox
misintona amin'ny netflix amin'ny mac